Ungazigcina njani iikati ngaphandle kwezityalo zendlu - Ikati Care
Iholide Ne Seasonal Izixhobo
Ungazigcina njani iikati ngaphandle kwezityalo zendlu
Akukho sisombululo singenasiphukuphuku, kodwa kukho iindlela zokwenza ukuba kube nzima kakhulu kwikati yakho ukonakalisa izityalo zendlu yakho. Ukuba udiniwe kukubona uhlaza lwakho luhluthiwe kwaye lungcolisiwe, akukho pun ejoliswe kuyo, nika ezinye zezi ngcebiso.
Jika iimbaleki zeplastiki zekhaphethi ujonge ezantsi
UKUYA Imbaleki yekhaphethi yeplastiki inokuba ngumqobo kwiikati ezineenyawo ezibuthathaka. Jika imbaleki ijonge ezantsi ukuze ukucoca okuncinci okukunceda ekubambeni ikhaphethi ngoku yalatha kwaye ubeke isityalo sakho ngaphezulu. Uninzi lweekati azizukuthanda ukuziva iinyawo zazo zihlatyiwe njengoko zisondela kumtyali nangona ukucoca kungenabungozi. Ungazama oku ngezicwangcisi zomgangatho okanye usebenzise ishedyuli enzima ukusika iplastikhi ibe ngamaqhekeza amancinci oza kuyisebenzisa kwiishelufa nakwiibhedi zeencwadi.
Iingxaki zeKati yoLusu akufuneki uyihoye
6 Iimpawu zePati zokukhulelwa ezingabonakaliyo
Ikati lodonga ukuze kuqaqambe Usuku lwakho
Beka izityalo kwiiKheji zeNtaka ezihlobisayo
Ukuba unezityalo ezincinci ikati yakho ethanda ukuyicofa ngeefestile kunye neeshelfu, zama ukuzifaka Iindlwana zokuhombisa zeentaka . Konke okufuneka ukwenze kukususa umphezulu wekheyi kwisiseko sawo, cwangcisa isityalo esinye okanye nangaphezulu ngaphakathi, kwaye ubambe umva phezulu. Ukufumana ukhuselo olongezelelekileyo, xhoma ikheyi kwihaki okanye kwintonga yekhethini.
Gquma Umhlaba Ngamatye Amatye
Iingxondorha zinokugcina ikati yakho ekumbeni umhlaba ngaphandle kweembiza zakho kwaye yenze iimbiza zibe yindawo enqwenelekayo yokuzikhulula. Icebo kukugubungela umphezulu womhlaba nge amatye agudileyo Ubuncinane nge-intshi enye okanye ngokukhethekileyo kukhulu. Sukusebenzisa igrabile encinci kuba isilwanyana sakho sinokuyiphutha ngenkunkuma kwaye ujonge kuso njengesimemo sokusebenzisa isixhobo sokutyala njengebhokisi yakhe entsha yenkunkuma.
Ukutshiza izityalo kunye nokukrakra okukrakra
Ukuba ikati yakho iyathanda ukuhlafuna izindlu zakho, ukuzenza zingcamle kakubi kunokusombulula ingxaki. Fafaza amagqabi (ngaphezulu nangaphantsi) kunye neziqu kancinci ukutshiza okukrakra kwaye yome. Beka isityalo ngasinye kwindawo yaso yesiqhelo kwaye ujonge indlela ikati yakho esabela ngayo xa izama ukuluma igqabi. Kungathatha iinzame ezimbalwa, kodwa uya kuthatha isigqibo sokuba akasafuni ukwenza isaladi kwi ficus yakho exabisekileyo.
Zama ukusebenzisa iFoyile
Iikati azikuthandi ukuziva, ukungcamla okanye ukunuka ngefoyile ye-aluminiyam , inokuba sesinye isithintelo sokungakhathali kwekati yakho. Zama ukusonga imbiza kwi-foil okanye ubuncinci ukubeka i-foil crumpled phezu komhlaba.
Beka izityalo kwi-Aquarium ekhethiweyo
Ukuba unengqokelela yezityalo ezincinci ukuya kubukhulu obuphakathi, uzifake kwi i-aquarium enomphezulu wekhusi inokuba yiyo yonke into oyifunayo ukugcina ikati yakho imo yokujonga-kodwa-ungachukumisi. Umphezulu wekhusi uvumela ukuhamba komoya, kodwa ikati yakho iya kuyigcina kuye inzipho.
Gquma Umhlaba NgeLitrus-Scented Landscape Fabric
Iikati ezininzi azilithandi ivumba layo nantoni na enesitrasi. Zama ukugubungela umhlaba ojikeleze izityalo zakho ungqimba lwe Ilaphu lendawo esikiweyo ukuba ilingane nomphezulu wokutyala kwaye ifafazwe ngokuxutywa ioyile efunekayo yeorenji . Yongeza malunga nama-20 amathontsi e-oyile ukuya kwi-ounces ezili-16 zamanzi kwibhotile yokutshiza, yiphathe ilaphu kakuhle kumacala omabini, emva koko uyibeke emhlabeni ojikeleze isityalo. Hlaziya i-citrus spray ngeveki ukuze uncede ugcine ikiti.
Nciphisa iLemon ye-Peel ejikeleze isiSeko seZityalo
Uninzi lweekati aluyithandi ilamuni, ke sukuyilahla iipelisi emva kokuba ujusi ialam zakho. Endaweni yoko, zicukuceze zibe yimicu kwaye uzilungiselele ngaphezulu komhlaba ojikeleze isityalo. Esi sisombululo sisebenza ngakumbi ukuba uhlaziya amaxolo kwiveki nganye. Unokudibanisa i-lemon kunye ne-orange peels xa uthanda.
Nika ikati isiTyalo sakhe
Ngamanye amaxesha esona sisombululo sisiso sokurhwebesha ikati yakho kude nezityalo kukumnika eyakhe. Iivenkile ezininzi ezithengisa izilwanyana zasekhaya ziyathengisa iikiti zekati zengca ekuvumela ukuba ukhule ingca ekhuselekileyo ikati yakho inganamathela kuyo nanini na ifuna. Ukuba ubeka isixhobo sokutyala kule ngca apho ikati yakho inokufikelela ngokulula kuyo, unokwanela ngokwaneleyo ukushiya izityalo zakho zodwa.
Qhubeka Uzama Kude Kusebenze Into
Ngelixa ezinye iikati zingabaphangi bokufa bezityalo ezilukhuni, kunokwenzeka ukuba ikati yakho ingabikho kwizityalo zakho. Ngeendlela ezahlukeneyo ozikhethileyo, uya kufumana into esebenza nesilwanyana sakho sasekhaya! Qhubeka uzama de ufumane isisombululo esisebenzayo.
Isixhobo Somdaniso Ukucocwa Kwangaphandle Ngaphezulu Size Wedding Apparel Non-Diamond Engagement Rings Izinja Nokuhamba
Ihalloween Makeup Techniques
Ungayicoca njani i-pan ye-frying pan
yeyiphi into elungileyo yokuleqa ibhola yomlilo
uyisusa njani iglu ephambeneyo kulusu
Kuthatha ixesha elingakanani ukukhohlela kwekennel kusosulela emva kwee-antibiotics
Ukuhambela eMexico nosana
iziqhulo ezihlekisayo zokuthandana kwi-Intanethi
Iindawo Zeenkampu Ne Rv Parks